YxOS-P1: ကျယ်ပြန့်စွာကြီးထွားနေသော Yandex Open Source ကိုလေ့လာခြင်း - အပိုင်း ၁ | Linux မှ
YxOS-P1: ကျယ်ပြန့်စွာကြီးထွားနေသော Yandex Open Source ကိုလေ့လာခြင်း - အပိုင်း ၁
ဒီနှင့်အတူ အပိုင်း အပေါ်ဆောင်းပါးများ၏စီးရီးကနေ « Yandex ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် " ကျနော်တို့ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ကြီးထွားလာ၏ catalog ကျွန်တော်တို့ရဲ့စူးစမ်းစတင်ပါလိမ့်မယ် အက်ပ်များကိုဖွင့်သည် ကတီထွင်ခဲ့သည် နည်းပညာဆိုင်ရာiantရာမ de "Yandex LLC".
1 YxOS-P1: Yandex ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ် - အပိုင်း ၁
1.1 Yandex ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် applications များ
YxOS-P1: Yandex ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ် - အပိုင်း ၁
applications များ Yandex ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်
စတင်ခြင်းမပြုမီတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် မှလွဲ၍ ၎င်းကိုသတိပြုသင့်သည် Yandex ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် (YxOS)သင်သည်ကုမ္ပဏီ၏အခြားပွင့်လင်းသောစီမံကိန်းများစွာကို၎င်း၏တရားဝင်ဆိုဒ် ၂ ခုတွင်လည်းတွေ့နိုင်သည် GitHub (Yandex y YandexMobile) နှင့်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်များ Open Source, ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်အစီအစဉ် y ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် Libs.
Yandex သည်ဥရောပရှိအကြီးဆုံးအင်တာနက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြီးရုရှားတွင်လူကြိုက်အများဆုံးရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုလည်ပတ်သည်။ သုံးစွဲသူကိုအာရုံစိုက်ပြီးနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာဆိုင်ရာတီထွင်မှုများအပေါ် အခြေခံ၍ အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးရန်၊ သူတို့ထဲမှ Open Source ကိုဖန်တီးပြီးအသုံးပြုပါ။ " Yandex ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်
တွင်ဖော်ပြထားသောစီမံကိန်းများ၏စာရင်းမှ "Yandex ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်" အောက်ပါ Apps များဖြင့်စတင်ပါမည်။
အတိုချုပ် "Yandex ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ်" အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြသည် -
“ ဒါဟာကော်လံကို ဦး တည်ပြီးပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်ဒေတာဘေ့စ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဖြစ်ပြီးစုစည်းမှုမရှိတဲ့အချက်အလက်တွေအပါအ ၀ င်အလွန်များပြားတဲ့ဒေတာတွေကိုတည်ငြိမ်ပြီးရေရှည်တည်တံ့တဲ့နည်းနဲ့ကိုင်တွယ်တယ်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်သင့်အားအချိန်နှင့်တပြေးညီကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုအစီရင်ခံရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဒီစနစ်ဟာမျဉ်းဖြောင့်အတိုင်းအတာကိုတွက်ချက်နိုင်တဲ့အပြင် trillions of trillions နှင့် data petabytes တွေကိုသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်။ "
သူ့နေစဉ် «တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်» အောက်ပါတို့ကိုထည့်ပါ
“ ဒါဟာမြန်ဆန်ပြီးကော်လံ ဦး တည်ပြီးပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ် OLAP ဒေတာဘေ့စ်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်ဖြစ်ပြီး၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအစီရင်ခံစာများကို SQL query များကို သုံး၍ စစ်မှန်သောအချိန်တွင်ထုတ်ပေးသည်။ ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်စျေးကွက်ရှိအခြားကော်လံ -oriented database စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များထက်သာလွန်သည်။ ၎င်းသည်တစ်စက္ကန့်ကိုသန်းပေါင်းရာနှင့်ချီ။ တစ်ဘီလီယံကျော်သန်းနှင့်ဂစ်ဂါဘိုက်ဒေတာအကြားလုပ်ဆောင်သည်။ "
မှတ်ချက်ဖြေ - နောက်ထပ်ဖြည့်စွတ်တဲ့အချက်အလက်နဲ့ဒီဆော့ဗ်ဝဲနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုအောက်ပါမှာတိုက်ရိုက်တွေ့နိုင်တယ် GitHub အပေါ်တရားဝင် link ကို.
“ ဒါဟာမျိုးဆက်သစ်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ open source စာကြည့်တိုက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချရာနေရာတွေမှာအားဖြည့်ပေးတယ်။ ၎င်းကို Yandex သုတေသီများနှင့်အင်ဂျင်နီယာများကတီထွင်သည်။ MatrixNet algorithm ကိုဆက်ခံသည်။ Yandex တွင်လုပ်ငန်းများကိုခွဲခြားရန်၊ ခန့်မှန်းရန်နှင့်အကြံပြုချက်များပေးရန်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြစ်ပြီးကျယ်ပြန့်သောinရိယာများနှင့်အမျိုးမျိုးသောပြproblemsနာများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ "
"ဒါဟာဆုံးဖြတ်ချက်သစ်ပင်များအတွက် gradient ကိုအားဖြည့်ကိုအသုံးပြုတဲ့စက်သင်ယူမှု algorithm ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည် open source library တစ်ခုဖြစ်သည်။ "
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" ၏ဤပထမ ဦး ဆုံးရှာဖွေရေးအကြောင်းကို «Yandex Open Source», Technological Giant မှတီထွင်ထားသောစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကျယ်ပြန့်သောကျယ်ပြန့်သော application များကိုပေးသည် «Yandex LLC»; တစ်ခုလုံးအတွက်, ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » YxOS-P1: ကျယ်ပြန့်စွာကြီးထွားနေသော Yandex Open Source ကိုလေ့လာခြင်း - အပိုင်း ၁
* ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်ကြီးထွားလာခြင်း * => ခေါင်းစဉ်ငါ့ကိုပုပ်။ သူတို့ကအရာရာတိုင်းကိုထည့်ပြီးမင်းကိုဆက်စာမဖတ်စေချင်ဘူး။
ခင်ဗျား Linux ကနေကောင်းမလာခင်မှာမင်းဘာဖြစ်သွားသလဲမသိဘူး။
မင်္ဂလာပါ, Panchito ။ မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဤသို့သောဆောင်းပါးတွဲများကို Technologies Giant တစ်ခုချင်းစီတွင်ကိုယ်ပိုင်အက်ပလီကေးရှင်းများရှိသောကြောင့်ကျယ်ပြန့ ်၍ ကြီးထွားလာခြင်းဟုခေါ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်မည်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းများပြုလုပ်သည်နှင့်၎င်းတို့မှမည်သည့်အကျိုးကျေးဇူးများရရှိနိုင်ကြောင်းကိုတစ် ဦး ချင်းလေ့လာခြင်း။ အနာဂတ်အရစ်ကျအတွက်အမည် (ခေါင်းစဉ်) တိုးတက်စေနိုင်မလားကျနော်တို့လေ့လာပါလိမ့်မယ်။
ကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်လူတိုင်းမှာအဲဒီပရိုဂရမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ petabytes တွေမရှိကြပါဘူး။
ကြိုဆိုပါတယ်။ ArtEze! မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ၎င်းတို့သည်အသုံးဝင်ပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောပွင့်လင်းသည့်အက်ပ်များဖြစ်သည် အထူးသဖြင့် ClickHouse သည်အချက်အလက်ပမာဏအများအပြားကိုအာရုံစိုက်သောဖွံ့ဖြိုးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်သေးငယ်သော volumes များနှင့်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်လိမ့်မည်။ ထင်ရှားသည်မှာအသိုင်းအဝိုင်းများသို့မဟုတ်အုပ်စုများကဲ့သို့သေးငယ်သည့်အဖွဲ့အစည်းများအစားလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အချက်အလက်များစွာရှိသောကြီးမားသောအဖွဲ့အစည်းများအတွက်အသုံးဝင်ရန်ပိုမိုရည်ရွယ်သည်ကိုတွေ့မြင်ရသည်။
Debian - KDE နှင့်ဒုတိယ Debian 11 Installer Candidate မိတ်ဆက်ပေးသော Cinnamon Maintainer ကိုပြောင်းသည်။
YOS-P1: ကျယ်ပြန့်စွာကြီးထွားနေသော Yahoo Open Source ကိုလေ့လာခြင်း - အပိုင်း ၁